NLD ပါတီ မဲဆှယျယာဥျတနျးလိုကျပါတဲ့အမြိုးသမီး ၁ ယောကျ ကားကွိတျမိပွီး သဆေုံး – Voice of Myanmar
အောကျတိုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၂၀
ဧရာဝတီတိုငျး ရကွေညျမွို့နယျ အသုတျမွို့ သပွကှေငျးအုပျစု ကိုငျးတောကြေးရှာအနီး အသုတျ – ကြုံပြျောကားလမျးမှာ မနေ့ ( အောကျတိုဘာ ၁၈) ညနပေိုငျးက NLD ပါတီ အောငျနိုငျရေး မဲဆှယျ ယာဥျတနျးကို ဆိုငျကယျစီးပွီး လိုကျပါလာ ဝနျးရံသူ အမြိုးသမီး တဈယောကျ ယာဥျမတျောတဆမှုဖွဈကာ သဆေုံးသှားတယျလို့ သပွကှေငျးကြေးရှာနေ ဒသေခံ တှဆေီက သိရပါတယျ။
ရကွေညျမွို့နယျ အသုတျမွို့ မှာနတေဲ့ မခငျမြိုးသကျ (စြေးရောငျး) အသကျ (၃၈) နှဈဟာ NLD ပါတီ အောငျနိုငျရေး မဲဆှယျစညျးရုံးရေး အငျအားပွ ယာဥျတနျးမှာ HONDA ဆိုငျကယျ အဖွူရောငျကိုစီးနငျးလိုကျပါစဉျမှာ ဆိုငျကယျတဈစီးနဲ့ လကျကိုငျခငျြးခြိတျမိပွီး ဆိုငျကယျပျေါကနေ ပွုတျကသြှားတာကွောငျ့ နောကျကမောငျးလာတဲ့ မှနျလုံကားနဲ့ ကွိတျမိပွီး မခငျမြိုးသကျဟာ နရောမှာတငျ ဦးခေါငျးကွမှေ ဒဏျရာနဲ့ သဆေုံးသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
” အဲ့ဒီ အငျအားပွ ယာဥျတနျးနဲ့အတူ နောကျကနေ လိုကျပါလာတဲ့ ခရီးသညျတငျ HIGER အမြိုးအစား မှနျလုံ EXPRESS. ကားနံပါတျ MDY – 6Q / ….. နဲ့ ကွိတျမိတာဖွဈတယျ ” လို့ ပါတီအငျအားပွရာမှာ လိုကျပါဝနျးရံသူ ကိုအောငျမွငျ့ဦး ကပွောပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၁၃ ညနပေိုငျးကလညျ စဈကိုငျးခရိုငျ မွောငျမွို့ပျေါမှာ NLD ပါတီ အောငျနိုငျရေး မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကနေ သုံးဘီးဆိုငျကယျနဲ့ ကြောကျရဈရှာကို ပွနျလာခဲ့တဲ့သူ လူငယျ ၃ ယောကျဟာ မွောငျ – ပရိမ်မ ကားလမျး နဘတျကွီးရှာအနီးမှာ အခငျြးခငျြး စကားမြားပွီး ကြောကျခဲနဲ့ထုတာကွောငျ့ NLD ပါတီ ဝနျးရံထောကျခံသူလူငယျတဈယောကျသဆေုံးကာ လူသတျမှု ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။
ခြောငျးဦးမွို့နယျ ကုလားကွီးအုပျစု တပါယျအငျးရှာမှာလညျး NLD ပါတီ အောငျနိုငျရေး မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ကားပျေါကပွုတျကပြွီး ကားနောကျဘီးနဲ့ကွိတျမိလို့ NLD ပါတီ ဝနျးရံထောကျသူ လူငယျတဈယောကျသဆေုံးခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒါတှအေပွငျ ခြောငျးဦး ၊ ဘုတလငျ ၊ အရာတျော ၊ သပိတျကငျြး ၊ မွငျးမူ ၊ ကနျ့ဘလူ စတဲ့ ခရီးစဉျတှမှောလညျး မဲဆှယျစညျးရုံးရေး လိုကျပါဝနျးရံသူတှဟော ယာဥျမတျောတဆမှုတှဖွေဈပှားခဲ့လို့ သဆေုံး ဒဏျရာရသူတှေ ရှိခဲ့ပါသေးတယျ။
အောကျတိုဘာ ၁၆ ညနပေိုငျးကလညျး မွငျးမူမွို့ ကနျြစဈသားရပျကှကျ ဇယြောလမျးထိပျမှာ NLD ပါတီအလံကို ကားအမိုးပျေါက မတျတပျရပျပွီး ဝှရေ့မျးခဲ့တဲ့ လူငယျတဈယာကျဟာ အလံစတီးရိုးနဲ့ လြှပျစဈဓာတျကွိုး ထိမိလို့ ဓာတျလိုကျသဆေုံးခဲ့တဲ့ ဖွဈစဥျလညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
#VOM #voiceofmyanmar #NLDအောငျနိုငျရေးယာဉျတနျးမှမတျောတဆမှုမြား
NLD ပါတီ မဲဆွယ်ယာဉ်တန်းလိုက်ပါတဲ့အမျိုးသမီး ၁ ယောက် ကားကြိတ်မိပြီး သေဆုံး
အောက်တိုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၂၀
ဧရာဝတီတိုင်း ရေကြည်မြို့နယ် အသုတ်မြို့ သပြေကွင်းအုပ်စု ကိုင်းတောကျေးရွာအနီး အသုတ် – ကျုံပျော်ကားလမ်းမှာ မနေ့ ( အောက်တိုဘာ ၁၈) ညနေပိုင်းက NLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ် ယာဉ်တန်းကို ဆိုင်ကယ်စီးပြီး လိုက်ပါလာ ဝန်းရံသူ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ကာ သေဆုံးသွားတယ်လို့ သပြေကွင်းကျေးရွာနေ ဒေသခံ တွေဆီက သိရပါတယ်။
ရေကြည်မြို့နယ် အသုတ်မြို့ မှာနေတဲ့ မခင်မျိုးသက် (ဈေးရောင်း) အသက် (၃၈) နှစ်ဟာ NLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အင်အားပြ ယာဉ်တန်းမှာ HONDA ဆိုင်ကယ် အဖြူရောင်ကိုစီးနင်းလိုက်ပါစဉ်မှာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ လက်ကိုင်ချင်းချိတ်မိပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျသွားတာကြောင့် နောက်ကမောင်းလာတဲ့ မှန်လုံကားနဲ့ ကြိတ်မိပြီး မခင်မျိုးသက်ဟာ နေရာမှာတင် ဦးခေါင်းကြေမွ ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
” အဲ့ဒီ အင်အားပြ ယာဉ်တန်းနဲ့အတူ နောက်ကနေ လိုက်ပါလာတဲ့ ခရီးသည်တင် HIGER အမျိုးအစား မှန်လုံ EXPRESS. ကားနံပါတ် MDY – 6Q / ….. နဲ့ ကြိတ်မိတာဖြစ်တယ် ” လို့ ပါတီအင်အားပြရာမှာ လိုက်ပါဝန်းရံသူ ကိုအောင်မြင့်ဦး ကပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၃ ညနေပိုင်းကလည် စစ်ကိုင်းခရိုင် မြောင်မြို့ပေါ်မှာ NLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကနေ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်နဲ့ ကျောက်ရစ်ရွာကို ပြန်လာခဲ့တဲ့သူ လူငယ် ၃ ယောက်ဟာ မြောင် – ပရိမ္မ ကားလမ်း နဘတ်ကြီးရွာအနီးမှာ အချင်းချင်း စကားများပြီး ကျောက်ခဲနဲ့ထုတာကြောင့် NLD ပါတီ ဝန်းရံထောက်ခံသူလူငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးကာ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ချောင်းဦးမြို့နယ် ကုလားကြီးအုပ်စု တပါယ်အင်းရွာမှာလည်း NLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကားပေါ်ကပြုတ်ကျပြီး ကားနောက်ဘီးနဲ့ကြိတ်မိလို့ NLD ပါတီ ဝန်းရံထောက်သူ လူငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါတွေအပြင် ချောင်းဦး ၊ ဘုတလင် ၊ အရာတော် ၊ သပိတ်ကျင်း ၊ မြင်းမူ ၊ ကန့်ဘလူ စတဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာလည်း မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လိုက်ပါဝန်းရံသူတွေဟာ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့ သေဆုံး ဒဏ်ရာရသူတွေ ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၆ ညနေပိုင်းကလည်း မြင်းမူမြို့ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက် ဇေယျာလမ်းထိပ်မှာ NLD ပါတီအလံကို ကားအမိုးပေါ်က မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဝှေ့ရမ်းခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ယာက်ဟာ အလံစတီးရိုးနဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုး ထိမိလို့ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
#VOM #voiceofmyanmar #NLDအောင်နိုင်ရေးယာဉ်တန်းမှမတော်တဆမှုများ